Gbasara Anyị - TOPFEEL PACK CO., LTD
TOPFEEL PACK CO., LTDbụ onye nrụpụta ọkachamara, ọkachamara na R&D, n'ichepụta na azụmaahịa nke ngwaahịa ngwaahịa ịchọ mma. Ngwaahịa anyị bụ isi kalama acrylic, karama ikuku na-enweghị ihe ọ ,ụ ,ụ, ite ude, karama plastik, sprayer plastik, onye na-agbapụta ihe na karama PET / PE, igbe akwụkwọ wdg. Site na ọrụ nka, ike kwụsiri ike na ọrụ ndị ahịa dị mma, ụlọ ọrụ anyị nwere otuto dị elu n'etiti ndị ahịa.
(1) -GMP omumu ihe omumu.
(2) -60000 square shop ebe ọrụ ụlọ.
(3) -Cosmetic packaging / supplier.
(4) -ISO 9001: 2008, SGS, afọ 10 nyere ndị na-eweta ọla edo edo.
Ebumnuche nke TOPFEELPACK bụ "Ndị mmadụ na-agbagha, na-agbaso izu okè", ọ bụghị naanị na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla ihe dị mma na ngwaahịa dị oke mma, kamakwa ọrụ onwe ha. Site na ihe ọhụụ na teknụzụ na-aga n'ihu iji gbasoo ahịa nkwakọ ngwaahịa ihe ịchọ mma, anyị na-agbakwunye nnukwu mkpa na arụmọrụ ika na mkpokọta ihe osise, na-eji ahụmịhe bara ụba na ịchepụta na ịme arịa ịchọ mma, anyị na-anwa ike anyị ime ihe niile ka ọ bụrụ nke zuru oke iji mejuo arịrịọ ndị ahịa. .
A na-ebuga ngwaahịa anyị ebe niile na America, Europe, Australia na ọtụtụ mba na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Anyị nwere ezigbo aha azụmaahịa ma jiri obi anyị niile na-atụ anya imepụta ọdịnihu ka mma.
Topfeelpack nwekwara ike ịnye ọrụ OEM / ODM ọkachamara, Anyị nwere ike ịhazi nkwakọ ngwaahịa, mee mpụta ọhụrụ, nyefee ihe ndozi ahaziri iche, akwa na igbe igbe ndị ọzọ. Site na ngụkọta ngwakọta ịchọ mma iji nyere aka gosipụta ụdị gị, gbakwunye uru ngwaahịa ahụ ma chekwaa ọnụ ahịa. Nkwakọ ngwaahịa ihe ọhụrụ bụ mfe ahịa.
Anyị ebido "echiche nkwakọ ngwaahịa ihe ịchọ mma" iji nye ngwaahịa dị oke elu yana ọrụ nkwakọ ngwaahịa "otu nkwụsị."